RVP Oo Ceshtay Maaliyada Arsenal ee No.10, Iyo Podolski Oo Weli Aan Wax Number Ah La Siinin - jornalizem
RVP Oo Ceshtay Maaliyada Arsenal ee No.10, Iyo Podolski Oo Weli Aan Wax Number Ah La Siinin
Arsenal ayaa baahisay numberada ay ku ciyaarayaan ciyaartoydooda xilli ciyaareedka soo socda ee 2012-13, lakiin ciyaaryahankii ay xagaagan la soo wareegeen Lukas Podolski ayaan weli la siinin wax number ah.
Iyadoo mar kale Robin van Persie la siiyay numberkiisa n.10, waxa ay noqon kartaa in weeraryahanka Jarmalka uu sugayo in lakala cadeeyo mustaqbalka Van Persie, iyadoo hadii uu kooxda ka tago xagaagan uu dhaxli doono maaliyada RVP.
Webiste-ka Arsenal ayaa u soo qoray 27 jirkaan in numberkiisa gadaal laga soo sheegi doono.
Van Persie oo aan ku jirin kooxda Arsenal ee booqashada ku mareysa Asia ayaa waxaa doonaya kooxaha Manchester City iyo Manchester United, halka Juventus ay sidoo kale tartan ugu jirto RVP.
Inkastoo tababare Arsene Wenger uu weli rajo ka qabo inuu cesho kabtankiisa, hadana arintaan ugu danbeysay ayaa sii shideysa in Van Persie uu ku dhow yahay inuu kooxda ka tago, madaama numberkii Podolski aan weli lagu dhawaaqin iyadoo in muddo ah la hadal haayay inuu dhaxli doono numberka ciyaaryahanka reer Holland hadii uu baxo.
Dhinaca kale, weeraryahanka cusub ee Faransiiska Olivier Giroud ayaa waxa uu xiran doonaa no.12, halka Wojciech Szczesny uu qaatay maaliyada no.1 madaama Manuel Almunia uu kooxda ka tagay, Nicklas Bendtner ayaa isna xiranaya maaliyadiisaa 52 ka dib markii uu ka soo laabtay amaah uu ku joogay Sunderland xilli ciyaareedkii hore.